မန္တလေးမြို့ နိုဝင်ဘာ ၁၂ ရက်နေ့ည မြင်ကွင်းများ
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ် ဟေမာဇလရပ်ကွက် အကွက် ၆၁၆ နှင့် ၆၁၉ ရှိ ၅ထပ် မီးရထားတိုက်တန်းတွင် နေထိုင်သော မိသားစုများအနေဖြင့် ငလျင်ထပ်မံ လှုပ်ခတ်မည်ကို စိုးရိမ်ကာ အဆိုပါ ရပ်ကွက် ၇၇ လမ်းနှင့် ၂၈ လမ်းထောင့်ရှိ အ.မ.က
At 11/12/2012 10:54:00 PM No comments:
မိုဘိုင်းဖုန်း အင်တာနက်သုံးခများ ဒေတာစီးဆင်းမှုပမာဏအပေါ် မူတည်ကောက်ခံမည်
မိုဘိုင်းအင်တာနက်အသုံးပြုခများကိုမိနစ်ဖြင့်ကောက်ခံ မည့်အ စား ဒေတာ စီးဆင်းမှုပမာဏ (Bandwidth) ဖြင့် နိုဝင်ဘာလ အတွင်း ပြောင်း လဲကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းမှ သိရ သည်။ "နိုဝင်ဘာလထဲမှာ အင်တာနက်သုံးစွဲခကို Volume ဆွဲတဲ့ပေါ် မူတည်ပြီး ကောက်ခံသွားမှာပါ။ Download Volume နှုန်းနဲ့ ကောက်ခံ
At 11/12/2012 10:44:00 PM No comments:
ရဲက ဖေ့စ်ဘုတ်မှာ ပြည်သူတွေကို အကူအညီ ပြန်တောင်း
လောကကြီးက မျက်စေ့လည်စရာဖြစ်ခဲ့ရတာက ဖေ့စ်ဘုတ်ပေါ်က ရဲတပ်ဖွဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာမှာ ပြော ထားတာကြောင့်ပါ။ "ကူညီပါရစေ ဆိုတာ" ရဲတပ်ဖွဲ့ ရဲ့ ဆောင်ပုဒ်ပါ။ ဆိုလိုတာက ရဲတွေက ပြည်သူတွေကို ကူညီပေးဖို့ တာဝန်ယူ ထားတယ်ဆိုတာပါပဲ။
At 11/12/2012 10:02:00 PM No comments:
နိုင်ငံခြားဧည့်များအတွက် နေပြည်တော် တံခါးဖွင့်ပြီ
နိုင်ငံခြားသားဧည့်သည်တွေ နေပြည်တော် အလည်လာကြရေးအတွက် ဟိုတယ်နဲ့ ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း ၀န်ကြီးဌာနက လှုံ့ဆော်နေ ပါပြီ။ “နေပြည်တော်ကို နိုင်ငံခြားသားတွေ သွားရောက်ဖို့အတွက် Package Tour တွေ စီစဉ်ဖို့ ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေကိုလည်း အကြောင်းကြား ထားပါတယ်” လို့ ဟိုတယ်/ခရီး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဌေးအောင် က ပြောပါတယ်။
At 11/12/2012 09:38:00 PM No comments:
မြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်းဒေသမှာ တနင်္ဂနွေနေ့ မနက်ပိုင်းက ပြင်းအား ၆ဒသမ၈ အဆင့်ရှိ ငလျင်ကြီး ပြင်းပြင်းထန်ထန်လှုပ်ခတ် ပြီးတဲ့နောက် ပြင်းအားအတန်အသင့်ရှိတဲ့ ငလျင်ငယ်တွေဟာ ဒီမနက်ထိ ဆက်လက် လှုပ်ခတ် နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ငလျင်ငယ်တွေ ဆက်တိုက် လှုပ်ခတ်နေတာကြောင့် ဒေသခံ ပြည်သူတွေဟာ အထိတ်တ
At 11/12/2012 09:26:00 PM No comments:
မိသားစုဝင်ငွေအတွက် စခန်းပြင်အလုပ်ထွက်လုပ်သူ မယ်လဒုက္ခသည် ၂ဦး အသတ်ခံရ
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် တာ့ခ်ခရိုင်၊ မယ်လဒုက္ခသည်စခန်း၌ နိုဝင်ဘာလ ၇ရက်နေ့က မိသားစုဝင်ငွေ ရရှိရေးအတွက် စခန်းအပြင် ထွက်၍ အလုပ်ထွတ်လုပ်သူ ဒုက္ခသည်နှစ်ဦးသည် မယ်လစခန်းတောင် ဘက်ခြမ်း နှစ်မိုင် အကွာအဝေးရှိ ညာ့မူကလိုးရွာနှင့် ထီး မောထာ့ရွာ အကြားတွင် အသတ်ခံရကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။
At 11/12/2012 09:22:00 PM No comments:
တရုတ်-မြန်မာ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး လမ်းတစ်လျှောက် မှောင်ခိုကုန်သွယ်မှုများ စတင်ဖမ်းဆီး ယာဉ်ကြီးယာဉ်ငယ် အစီးရေ ၃၀၀ နီးပါးကို စစ်ဆေးရာ တရားမ၀င် ကုန်စည်မျိုးစုံ ဖမ်းမိကြောင်း ထုတ်ပြန်
တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေး လမ်းတစ်လျှောက်တွင် မှောင်ခိုလျော့ ကျစေ ရန် ဖွဲ့စည်းထားသည့် Mobile-Team အဖွဲ့မှ မှောင်ခိုကုန်သွယ်မှု များအား နိုဝင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့မှစကာ ဖမ်းဆီးလျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ထိုသို့ဖမ်းဆီးရာတွင် ၄ ရက်အတွင်း ဂျူတီယာဉ်ကြီး၊
At 11/12/2012 09:12:00 PM No comments:
ငလျင်လှုပ်ခတ်ပြီး သပိတ်ကျင်းမြို့နယ် မြင်ကွင်းများ
နိုဝင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းက ရွှေဘိုမြို့ မြောက်ဘက် ၄၅ မိုင်အကွာကို ဗဟိုပြု လှုပ်ခတ်ခဲ့သော အင်အား ရစ်ချက်တာစကေး ၆ ဒသမ ၈ ရှိ ငလျင်ကြောင့် သပိတ်ကျင်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ ဘုရား၊ တန်ဆောင်း၊ စာသင်ကျောင်းနှင့် လူနေအဆောက်အဦများ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု များ အား နိုဝင်ဘာလ ၁၂ ရက်နေ့က တွေ့ရစဉ်
At 11/12/2012 08:53:00 PM No comments:
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့က စံရိပ်ငြိမ်မှတ်တိုင်အနီး မင်းမဲ့စရိုက်ဆန်စွာ ရိုက်နှက်မှုများကျူးလွန်ခဲ့သည့် ဖြစ်စဉ်တွင် ပါဝင်ခဲ့သူ စည်သူမျိုးဇင်အား ဖမ်းဆီးရမိခြင်း
၁.၁၁.၂ဝ၁၂ ရက်နေ့ (ဝ၁ဝဝ)အချိန်ခန့် ရန်ကုန်-အင်းစိန်လမ်း၊ စံရိပ်ငြိမ်မှတ်တိုင် အနီး ယာဉ် (၁)စီးအား အခြား ယာဉ်(၄)စီးမှ ရှေ့/နောက် ပိတ်ညှပ်ရပ်ပြီး ဆဲဆိုကြိမ်းမောင်းထိုး ကြိတ်ပြီး ကားအား လည်းဖျက်စီးခဲ့သည့်ဖြစ်စဉ်တွင် ပါဝင်ခဲ့သူ စည်သူမျိုးဇင်အား ၇.၁၁.၂ဝ၁၂ ရက် ည ၁၁ နာရီခန့်အချိန် တွင် ပြစ်မှု
At 11/12/2012 08:44:00 PM No comments:
စစ်ကိုင်းနှင့် ရွှေဘိုခရိုင်အတွင်း လှုပ်ခတ်ခဲ့သော ငလျင်ဒဏ်ကြောင့် သေ ဆုံးသူ ၂ ဦး၊ ပျောက်ဆုံးသူ ၅ ဦး၊ ဒဏ်ရာရသူ ၂၆ ဦးနှင့် ပြိုကျပျက်စီးသည့်အဆောက်အဦးပေါင်း ၁၁၈ ခု ရှိပြီး ဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုး ကျပ် ၂၆၉၂. ၅ သိန်းခန့် ရှိနိုင်ကြောင်း စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့က သတင်း ထုတ်ပြန်ထားသည်။
At 11/12/2012 08:32:00 PM No comments:
တရုတ်လူမျိုးတစ်ဦးက အမှိုက်ကောက် ကလေးငယ် တစ်ဦးအား ရိုက်နှက်ခဲ့သဖြင့် ရုန်းရင်းဆန်ခတ် ဖြစ်ပွါး
ကွမ်ကျိုးမှ လာရောက်သော တရုတ်လူမျိုး တစ်ဦးက အမှိုက်ကောက် ကလေး ငယ်တစ်ဦးအား မဟာေ အာင်မြေ ကျောက်မျက် ရတနာ ရောင်းဝယ်ရေး စခန်းအတွင်း ရိုက်နှက်ခဲ့သဖြင့်အများ ပြည်သူ များ မကျေမနပ် ဖြစ်ကာ အထိကရုဏ်း အသွင်ဆောင်သည့် အခြေတစ်ခု ဖြစ် ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
At 11/12/2012 07:53:00 PM No comments:
ရွှေသံလွင် ကုမ္ပဏီပိုင် MV Shwe Than Lwin ဆီတင် သင်္ဘောအား ရေတပ်နဲ့အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနပူးပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့
ရွှေသံလွင် ကုမ္ပဏီပိုင် MV Shwe Than Lwin ဆီတင် သင်္ဘော နဲ့ ကော့သောင်း ကနေမော်လမြိုင် ကို ဒီဇယ်ဆီ တင်သွင်းလာရာ လိုင်စင် ခွင့်ပြုချက်ထက်အများကြီးပိုနေတဲ့ အတွက် ရေတပ် နဲ့ အကောက်ခွန် ဦးစီးဌာန ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်း မော်လမြိုင်အခြေစိုက် အကောက်ခွန်
At 11/12/2012 07:47:00 PM No comments:
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း လမ်းများပြန်လည်ပြုပြင်ရာတွင် အမျိုးသမီးအလုပ်သမားများအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံနေရ
လမ်းဖောက်လုပ်ရာတွင် အလုပ်သမားများအားလုပ်အားခငွေကြေးများေ ပးဆောင်ရာတွင် မတန်တဆ နှိမ်ပေးနေကြောင်းသိရသည်။အထူး သဖြင့်ကျေးလက်ဒေသနေ အမျိုးသမီးများအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေခြင်းအပေါ် အခွင့်ကောင်းယူပြီး တစ်ရက်လုပ်အားခငွေမှာ အမျိုးသမီးတစ်ဦးလျင် ၁၀၀၀ ကျပ်နှင့် တစ်ချို့နေရာများတွင် ၁၅၀၀ ၀န်း ကျင်သာရရှိကြောင်း
At 11/12/2012 07:26:00 PM No comments:
အိုဘားမားခရီးစဉ်အတွက် အမေရိကန်အထူးတပ်ဖွဲ့များ လုံခြုံရေး စီမံများ ကြိုတင်ဆောင်ရွက်နေ
အမေရိကန် သမ္မတ မစ္စတာ ဘာရက်အိုဘား မား မြန်မာပြည်လာရောက် မယ့် ကိစ္စမှာ သူ့ရဲ့အထူး တပ်ဖွဲ့တွေ မြန်မာနိုင်ငံကို ကြိုတင်ရောက် ရှိနေပြီး လုံခြုံရေး အစီအမံတွေကို လေ့လာနေပါပြီ။မြန်မာနိုင်ငံမှာ အမေရိကန် သမ္မတတဦးရဲ့ နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကာလအတွင်းမှာ သမိုင်းဝင်လာရောက်မယ့် ခရီးစဉ်အတွက် လုံခြုံရေးဟာ အထူးရေးကြီးတာမို့ အခုလို ကြိုတင်စီမံ
At 11/12/2012 07:20:00 PM No comments:
ဘုရားသုံးဆူမြို့တွင်စုစုပေါင်းကျပ်သိန်း ၉၀ကျော်အထိ ဖောက်ထွင်းခိုးယူမှု ဆိုးရွားနေ
ကရင်ပြည်နယ် ဘုရားသုံးဆူမြို့တွင်ယခုရက်ပိုင်း အတွင်း ဖောက်ထွင်းခိုး ယူခံရသော ရွှေနှင့် ငွေစက္ကူ စုစုပေါင်းမှာ တန်ဖိုး အားဖြင့် ကျပ်ငွေသိန်း ၉၀ကျော်ဖိုး ရှိသည်အထိ ဆိုးရွားလျှက်ရှိကြောင်း ဘုရားသုံးဆူမြို့ခံများ က ပြောဆိုနေသည်။ဘုရားသုံးဆူမြို့တွင် အောက်တိုဘာလ ၂၆ရက်မှ နိုဝင်ဘာလ ၁၂ရက်နေ့အထိ ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ဖောက်ထွင်းခိုးယူမှု
At 11/12/2012 07:15:00 PM No comments:
သတင်းသမား အယောင်ဆောင်ပြီး စီးပွားဖြစ် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ ရိုက်ကူးနေ
မျက်မှောက်ကာလတွင် နေ့စဉ်ထုတ် သတင်းစာနှင့် အပတ်စဉ်ထုတ် ဂျာနယ်များ၌ သတင်းများကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖော်ပြလာရာ လူအများမှာ သတင်းများကို စိတ်ဝင်တစား ရှိလာကြပြီး သတင်းရေး သားသော သတင်းသမားများကိုလည်း တလေးတစား ရှိလာကြသည်။ ယင်းအခြေအနေကို အခါအခွင့်ယူ၍ သတင်းသမား အယောင်ဆောင်
At 11/12/2012 07:09:00 PM No comments:
CNF နဲ့ အစိုးရ ပြည်ထောင်စု အဆင့် ပြန်လည်ဆွေးနွေးမည်
ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး နှင့် ဦးသိန်းစိန်အစိုးရတို့ နှစ်ဖက် ဒုတိယ အကြိမ်ပြည်ထောင်စု အဆင့် ပြန် လည်ဆွေးနွေး တော့မည် ဟု ကြားသိရသည်။ယခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ရန်ကုန်မြို့တွင် နှစ်ဖက်တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးကြမည်ဖြစ်ပြီး စီအဲန် အက်ဖ် ဖက်မှ အဖွဲ့ခေါင်း ဆောင်အဖြစ် အထွေထွေအတွင်း ရေးမှူးချုပ် ပူး ဇင်ကျုံး၊ ဒုတိယ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
At 11/12/2012 07:01:00 PM No comments:
ထိုင်းနိုင်ငံ တောင်ပိုင်း ဖန်ငမြို့နယ် ရေပိုင်နက်အတွင်း လှေဖြင့် တရားမ၀င် ရောက်ရှိလာသည့် ဘင်္ဂါလီ ၁၁၂ ဦးကို ထိုင်း အာဏာပိုင်များက ယမန်နေ့တွင် ဖမ်းဆီးလိုက်သည်။ဖမ်းဆီးခံရသော ဘင်္ဂါလီများသည် ရခိုင်ပြည်နယ်မှ ယခုလ ၂ ရက်နေ့တွင် စတင်၍ ပင်လယ်ပြင်ကိုဖြတ်ကာ မလေးရှားနိုင်ငံသို့သွားရန် ထွက်ခွာလာသူ
At 11/12/2012 05:29:00 PM No comments:
သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူရာတွင် ရိုပာင်ဂျာလူမျိုးပာုဖော်ပြပေးရန် ဘင်္ဂါလီများတောင်းဆို
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း နေထိုင်သူများအား သန်းခေါင်စာ ရင်းကောက်ယူရာတွင် ဘင်္ဂါလီများက၎င်းတို့ အား ရိုပာင်ဂျာ လူမျိုးပာု စာရင်းဖော်ပြ ပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ “ဘင်္ဂါလီတွေကို သန်းခေါင်စာ ရင်းကောက်ယူတဲ့အခါမှာ သူတို့ကို
At 11/12/2012 04:58:00 PM No comments:
ဇနီးဖြစ်သူနှင့် အိမ်ထောင်ရေး ဖောက်ပြန် သည်ဟု သံသယဝင်ကာ လူသတ်မှုဖြစ်
မတ္တရာမြို့နယ်၊ အုတ်ဖိုလေး ကျေးရွာ ယာစောင့် တဲတွင် အောက် တိုဘာ ၂၉ရက် နံနက်က လူသတ် မှု ဖြစ်ပွား ခဲ့သည်။ ယင်းကျေးရွာနေ ဦးမြင့်အောင် က ထိုနေန့ နံနက် ၆နာရီ ခန့်က ယာမြေကွက်သို့ ပဲမျိုးစေ့ချရန် သွားရောက်ရာတွင် ၄င်း၏ မွေးစား သားသည် ဝဲဘက်ရင်အုံနှင့် ဝဲလက်ဖျံတို့၌ ဓား ဒဏ်ရာများဖြင့် သေဆုံး
At 11/12/2012 04:50:00 PM No comments:
မန္တလေးတိုင်း(၃၁)မြို့နယ်မှ အသေးစားငွေချေးလုပ်ငန်းများအတွက် ကျပ်သိန်းတစ်သောင်းကျော် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးကျော်ဆန်း ထုတ်ပေး
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြို့နယ်(၃၁) မြို့နယ်မှ တောင်သူများနှင့် အသေးစားငွေချေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် သမ၀ါယမအသင်း များအတွက် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးကျော်ဆန်းက ထုတ်ချေးငွေ စုစုပေါင်း ကျပ်သိန်းတစ်သောင်းကျော် ပေးအပ်ပွဲ အခမ်းအနားကို မန္တလေးတိုင်း ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်ရှိ သမ၀ါယမကောလိပ် တွင် ကျင်းပခဲ့သည်။
At 11/12/2012 04:46:00 PM No comments:
အိုဘားမားကို ကြိုဆိုသည့် ဂရပ်ဖတီ တရက်အတွင်း အဖျက်ခံရ
အမေရိကန် သမ္မတ ဘားရက် အိုဘားမား မြန်မာပြည်သို့ ပထမဆုံး လာရောက်မည့် ခရီးစဉ်ကို ကြိုဆိုသည့် အနေဖြင့် Night အဖွဲ့က ရေးဆွဲထားသည့် အိုဘားမား ဂရပ်ဖတီ ပုံကို တရက်တာအတွင်း ဖျက်ဆီး ခံလိုက်ရကြောင်း သိရသည်။
At 11/12/2012 04:41:00 PM No comments:
မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ် ဘောလုံးအသင်း ပိုင်ရှင်များ သိန်း သောင်းချီရှုံးပေါ်နေ
မြန်မာနိုင်ငံ ထိပ်တန်းစီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်ကြီးများ ပိုင်ဆိုင်သော မြန် မာနေရှင်နယ်လိဂ် ဘောလုံး အသင်းများမှာ နှစ်စဉ် ငွေကျပ်သိန်း သောင်း ချီ အရှုံးပေါ်လျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိသည်။၂၀၀၉ ခုနှစ်မှ စတင်ခဲ့သော မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ်ပြိုင်ပွဲ (Myanmar National League) များအတွက် မြန်မာနိုင်ငံ ထိပ်တန်းစီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်ကြီးများ
At 11/12/2012 04:39:00 PM No comments:
At 11/12/2012 04:28:00 PM No comments:
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး ပုဂ္ဂလိကပိုင် လေယာဉ်မောင်း အကယ်ဒမီ သင်တန်းကျောင်း ဖွင့်လှစ်မည်
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး ပုဂ္ဂလိကပိုင် လေယာဉ်မောင်း အကယ်ဒမီ သင်တန်းကျောင်း ( Myanmar Avicition Academy ) ကို ပုသိမ် လေဆိပ်တွင် ဖွင့်လှစ် သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ လေယာဉ်မောင်း သင်တန်းကျောင်းကို ထူးကုမ္ပဏီမှ ၂၀၁၃ ခုနှစ် မတ်လတွင် ဖွင့်လှစ် သွား မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
At 11/12/2012 04:21:00 PM No comments:
တကျော့ပြန် ဘင်္ဂလီ-ရခိုင်အဓိကရုဏ်း နိုင်ငံတကာ အစ္စလာမ်အသင်းများသွေးထိုးလှုံ့ဆော်မှုရှိ
အောက်တိုဘာလ အတွင်း တကျော့ပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်လာသော ဘင်္ဂလီ-ရခိုင်အဓိကရုဏ်းသည် နိုင်ငံတကာနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းက အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်များ၏ သွေးထိုးလှုံ့ဆော်မှုကြောင့်ဖြစ်သည်ဟု ရခိုင်အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချူပ်(ALD) ဥက္ကဌ ဦးအေးသာအောင်က သုံးသပ်ပြောဆို လိုက်သည်။
At 11/12/2012 04:09:00 PM No comments:
ရွှေဘိုမြို့ မြောက်ဘက်တွင် ဗဟိုပြု၍ လှုပ်ခတ်ခဲ့သော အင်အားပြင်း ငလျင်ကြောင့် သေဆုံးသူ (၁၁) ဦးရှိခဲ့
နိုဝင်ဘာလ ၁၁ ရက် နံနက် ပိုင်းက ရွှေဘိုမြို့မြောက်ဘက် ၄၅မိုင်အကွာကို ဗဟိုပြုလှုပ်ခတ် ခဲ့သော အင်အားရစ်ခ်ျတာ စကေး ၆ ဒသမ ၈ရှိ အင်အားပြင်း ငလျင်ကြောင့် သေဆုံးသူ (၁၁) ဦးရှိခဲ့ပြီး ဒဏ်ရာရရှိသူ (၃၆) ဦးရှိကြောင်း ရဲမှတ်တမ်းများမှ တစ်ဆင့် သိရှိရသည်။
At 11/12/2012 04:03:00 PM No comments:
ငလျင်ကြောင့် ပိတ်မိနေသည့် ရွှေတွင်းလုပ်သား ၂၀ လွတ်မြောက်
မန္တလေးတိုင်း စဉ့်ကူးမြို့နယ် ကျည်တောက်ပေါက်ကျေးရွာနှင့် ကန်တောင်ကျေးရွာရှိ ရွှေတွင်း နှစ်တွင်း တွင် ရွှေတွင်း လုပ်သား ၂၀ ငလျင်ဒဏ်ကြောင့် ပိတ်မိနေရာမှ ပြန်လည် လွတ်မြောက်သွားပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ မြေတွင်းထဲတွင် ၄ နာရီကြာ ပိတ်မိနေခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ၄င်းတို့ဖာသာ မြေတွင်းထဲမှ လမ်းကြောင်းရှာ တူးဖော်ကာ လွတ်မြောက်အောင် ကြိုးပမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ နိုဝင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့ ငလျင်လှုပ်ခတ်မှုကြောင့် ယင်းဒေသရှိ ရွှေတွင်းတတွင်းတွင် လူ ၁၁ ဦးနှင့် အခြားတတွင်းတွင် ၉ ဦး၊ စုစုပေါင်း ၂၀ ဦး ပိတ်မိနေခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
At 11/12/2012 03:47:00 PM No comments:
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး သပိတ်ကျင်းမြို့နယ် အပါအ၀င် ငလျင်ဒဏ်ကြောင့် ပျက်စီးဆုံး ရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ သည့် မြင်ကွင်းများ (ဓါတ်ပုံ)
At 11/12/2012 01:17:00 PM No comments:
Projector စနစ်တွဲဖက်ပါဝင်တဲ့ Hybrid Android Tablet PC ပြည်တွင်းဈေးကွက်ဝင်ရောက်
Projector Hybrid Tablet PC
Projector စနစ်ပါ တွဲဖက်ပါဝင်တဲ့ Hybrid အမျိုးအစား Android Tablet PC ကို ပြည်တွင်းဈေးကွက်အတွင်း ၀ယ်ယူအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ပြည်တွင်းဈေးကွက်ထဲသို့ ၀င်ရောက်လာသည့် ပထမဦး ဆုံးသော Pico-projector တွဲဖက်ပါဝင်သည့် Android Tablet
At 11/12/2012 01:09:00 PM No comments:
နိုဝင်ဘာ ၈ရက်နေ့ ည၁၁း၀၀ နာရီအချိန်ခန့်က တောင်ကြီးမြို့၊ သစ်တောရပ်၊ ကမ္ဘောဇ လမ်း၊ အိမ် အမှတ်(၁၂၀)တွင်မီးလောင် ကျွမ်းမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ မီးလောင် ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားရ သည့် အကြောင်းရင်းမှာ တောင်ကြီး တန်ဆောင်တိုင် မီးပုံးပျံပြိုင်ပွဲ ၀င်ရန်ညမီးကြီး အမျိုး အစားဖြစ်သဖြင့်စေတန် မီးအဖွဲ့က ယမ်းစပ်ခြင်း
At 11/12/2012 01:07:00 PM No comments:
ရခိုင်အရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ ဘာတွေ၊ ဘယ်လို လုပ်နေသလဲ၊ ဘာတွေ ဘယ်လို ဆက်လုပ်မှာလဲ ဟူ၍ မေးမြန်းကြသော မိတ်ဆွေများအတွက် The Voice Weekly ပါ ဆောင်းပါး ဖြစ်ပါတယ်-
အထက်တန်းကျသော အမျိုးသားရေးနှင့် သန်း ၆ဝ ၏ မနက်ဖြန်
လတ်တလော တစ်ကျော့ပြန် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အကြမ်းဖက်မှု များသည် မြန်မာ့နွေဦး ကို အရုပ် ဆိုးစေမည် ဟု နိုင်ငံတကာ ကျွမ်းကျင်သူများက ထောက်ပြ ပြောကြားခဲ့ကြသည်။
At 11/12/2012 12:58:00 PM No comments:
Arsenic အဆိပ်နဲ့ သေရတဲ့လူ
အမျိုးသမီးတစ်ယောက် ရုတ်တရက် နှာခေါင်း ပါးစပ် မျက်လုံးနဲ့ နားကေ န သွေးထွက်ပြီး သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်သူ့ကိုဆေးရုံပို့ပြီး စစ်ဆေး ရာမှာ နာရီဝက်လောက်နေတော့ ဆရာဝန်တွေ ဘာကြောင့်သေဆုံးလဲဆိုတာ အဖြေထွက်လာပါတယ်ဆရာဝန်ကပြောပါတယ် သူကကိုယ့်ဟာကိုယ် သတ်သေတာမဟုတ်သလို အသတ်ခံရခြင်းလဲမဟုတ်ပါဘူး ရုတ်တရက်
At 11/12/2012 12:27:00 PM No comments:
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ခရီးစဉ်အချိန်ဇယား
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ ၅ ရက်တာ ခရီးကို ယနေ့ နိုဝင်ဘာလ ၁၂ ရက်နေ့ က စတင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့ ည ၇ နာရီ ၄၀ မိနစ်မှာ ရန်ကုန် အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ လေဆိပ်ကနေ ထိုင်းနိုင်ငံကို ထွက်ခွာမှာဖြစ်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံက တဆင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ဒေလီသို့ ဆက်လက်ထွက်ခွာမှာဖြစ်ပါတယ်။
At 11/12/2012 11:32:00 AM No comments:
ရခိုင်လူငယ် နှစ်ဦးကို တာမွေ ရဲစခန်းတွင် ဥပဒေမဲ့ ရိုက်နှက် ထိုးကြိတ်
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်း ရခိုင် လူငယ်တဦးနှင့် တခြား လူငယ် တစ်ဦးတို့ကို ရန်ကုန်တိုင်း တာမွေမြို့နယ် ရဲစခန်း အာဏာပိုင်များ က ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဥပဒေမဲ့ ရိုက်နှက် ထိုးကြိတ်ခဲ့ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
At 11/12/2012 11:24:00 AM No comments:
ယနေ့(၁၂.၁၁.၂၀၁၂)ရက်နေ့၁၀နာရီ ၃၀ အချိန်တွင်"ပျဉ်းမနားမြို့ ကမ္ဘောဇဘဏ်ဘေး မီးလောင်မှုဖြစ်ပွား"
"ပျဉ်းမနားမြို့ ကမ္ဘောဇဘဏ်ဘေး မီးလောင်မှုဖြစ်ပွား"ယနေ့(၁၂.၁၁. ၂၀၁၂) ရက်နေ့ ၁၀နာရီ ၃၀ အချိန်တွင် နေပြည်တော်ကောင်စီ နယ်မြေပျဉ်းမနားမြို့ရှိ ဘိုတောက်ထိန်လမ်းနှင့် ဦးဘွားလမ်းထောင့် ရှိ ငွေစန္ဒာ စတိုးဆိုင်(ကမ္ဘောဇ ဘဏ်)ဘေးတွင် မီးလောင်မှု ဖြစ် ပွားနေကြောင်းသိရသည်။အဆိုပါ မီးလောင်မှုသည် ၀ါယာရှော့ေ
At 11/12/2012 11:03:00 AM No comments:
USA တွင်ကျင်းပသည့် Miss. Diaspora ပြိုင်ပွဲတွင် မြန်မာအမျိုးသမီး တစ်ဦး People's Choice Award ရရှိ
အမေရိကန်နိုင်ငံ နယူးယောက်မြို.တွင် နိုဝင်ဘာ၁၀ရက်နေ.က ကျင်းပ
ခဲ့သည့် Miss Diaspora Models International 2012-2013 Beauty Competition ပြိုင်ပွဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံသူ Ninda Taylor ခေါ် မယမုံမိုးက International People's Choice Award ဆုရရှိခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။
At 11/12/2012 09:55:00 AM No comments:
ပြည်တွင်းထုတ် ဂျာနယ်များတွင် မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ဆန့်ကျင်သော အမျိုးသမီးပုံများ ဖော်ပြနေခြင်းကိစ္စ
ပြည်တွင်းထုတ် ဂျာနယ်များ တွင် မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ဆန့်ကျင်သော အမျိုးသမီးပုံများ ဖော်ပြနေခြင်း ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးစံနှင့် ကိုက်ညီမှု မရှိသည့် ဖော်ပြနေမှုများ အပေါ် စာနယ် ဇင်း ကောင်စီ အနေဖြင့် လိုအပ်သလို သုံးသပ် ဆောင်ရွက် နိုင်ရန် ပြန်ကြားေ ရး ဝန်ကြီးဌာနက နိုဝင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့ ရက်စွဲဖြင့်
At 11/12/2012 09:45:00 AM No comments:
စံရိပ်ငြိမ်ဖြစ်စဉ်ပါဝင်သူများ ရဲတပ်ဖွဲ့မှ စုံစမ်းနေပြီ
ရန်ကုန်မြို့ အင်းစိန်လမ်း စံရိပ်ငြိမ်မှတ်တိုင်အနီးတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် မင်းမဲ့ စရိုက်ဆန်ဆန် ရမ်းကားမှုတွင် ပါဝင်ခဲ့သူ တရားခံ (၈)ဦး အနက် ကောင်းမြတ်၊ စည်သူမျိုးဇင်၊ ဂျပန်ကြီး(ခ)ရင်မင်းသန့် ဟိန်း ထက်ဇော် (၄) ဦးတို့အား ဖမ်းဆီးရမိထား ပြီး ကျန်(၄)ဦးဖြစ် သည့် ငြိမ်းချမ်း၊ ထူးမြတ်(ခ) ထူးမြတ်အောင်၊ ဥာဏ်လင်း
At 11/12/2012 09:09:00 AM No comments:
ယနေ့ (နိုဝင်ဘာ ၁၂ ရက်) နံနက် ၀၀ နာရီ၊ ၄၉ မိနစ်၊ ၄၂ စက္ကန့်တွင် မိုးကုတ်မြို့မှ ၃၉ မိုင်အကွာကို ဗဟိုပြု၍ ရစ်ခ်ျတာစကေး ၅.၆ အဆင့်ရှိ အင်အားအသင့်အတင့်ရှိသော မြေငလျင်တစ်ခု လှုပ်ခတ်သွားခဲ့
ယနေ့ (နိုဝင်ဘာ ၁၂ ရက်) နံနက် ၀၀ နာရီ၊ ၄၉ မိနစ်၊ ၄၂ စက္ကန့်တွင် မိုးကုတ်မြို့မှ ၃၉ မိုင်အကွာကို ဗဟိုပြု၍ ရစ်ခ်ျတာစကေး ၅.၆ အဆင့်ရှိ အင်အားအသင့်အတင့်ရှိသော မြေငလျင်တစ်ခု လှုပ်ခတ်ကြောင်း U.S. Geological Survey ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် ဖော်ပြသည်။
At 11/12/2012 08:49:00 AM No comments:
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ပဋိပက္ခများ ထပ်ပြီး မပြန့်ပွားဖို့နဲ့ ရပ်တန့်သွားစေဖို့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ အနေနဲ့ ကြားဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပဋိပက္ခ များဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ ICG က ဒီကနေ့ ထုတ်ဖေါ်ကြေညာလိုက်ပါ တယ်။ဘယ်လ်ဂျီရမ်နိုင်ငံ ဘရပ်ဆဲလ်မြို့အခြေစိုက် ICG အဖွဲ့ကြီးက
At 11/12/2012 08:40:00 AM No comments:
နောက်ဆက်တွဲ ငလျင်လှုပ်ခတ်မှုတွေ ရှိလာနိုင်
တနင်္ဂနွေနေ့ မနက်ပိုင်းက စစ်ကိုင်းတိုင်း ရွှေဘိုမြို့အနီး ဗဟိုပြု တဲ့ ငလျင်ကြီး လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ အတွက် သေဆုံးမှုတွေ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုတွေ ရှိနေသလို နောက်ဆက်တွဲ ငလျင်လှုပ်ခတ်မှုတွေ ရှိလာနိုင်တာမို့ သတိရှိကြဖို့ ပညာရှင်တွေက သတိပေးနေပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေ လုပ်နေတဲ့ Save the Children အဖွဲ့က
At 11/12/2012 08:32:00 AM No comments:
သစ်တော ထိမ်းသိမ်းရေး အမေရိကန်-မြန်မာ ဆွေးနွေး
မြန်မာ-အမေရိကန် သဘာဝပတ် ၀န်းကျင်ရေးရာနဲ့ သစ်တောရေးရာ ဆွေးနွေးပွဲ ဂျပန်နိုင်ငံ ယိုကိုဟားမား မြို့မှာ ကျင်းပခဲ့စဉ်။ (နိုဝင်ဘာလ ၁၀ ရက်၊ ၂၀၁၂)။
မြန်မာနိုင်ငံဟာ အခုအချိန်က စတင်ပြီး သစ်နဲ့သစ်တောထွက် ပစ္စည်းတွေ ရောင်းချရေးထက် သစ်တောသစ်ပင်တွေ ပြုစုပျိုးထောင်ရေးနဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးကို ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ပြီးတော့ ဒီလုပ်ငန်းတွေအတွက် အမေရိကန်ရဲ့အကူ အညီကို ကြိုဆိုတယ်လို့၊
At 11/12/2012 07:59:00 AM No comments:
At 11/12/2012 07:56:00 AM No comments:
ညီနောင်တိုင်းရင်းသားပါတီများအဖွဲ့က သမ္မတအိုဗားမားနဲ့တွေ့ဆုံလိုကြောင်း တောင်းဆို
နိုဝင်ဘာလ ၁၉ရက်နေ့ မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်ရှိမယ့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသမ္မတ အိုဘားမားနဲ့ တွေ့ဆုံလိုကြောင်း တိုင်းရင်းသား (၁၃) ပါတီနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ညီနောင်တိုင်းရင်းသားပါတီများ ဖက်ဒရေးရှင်း(NBF)အဖွဲ့က ဒီကနေ့ ရက်စွဲနဲ့ ကြေညာချက်တစ်ရပ်ထုတ်ပြန်ပြီး တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
At 11/12/2012 07:52:00 AM No comments: